blog Idol အလိုရှိသည်
လိုအပ်သော အရည်အချင်း ။ ။ သဏ္ဍန်လုပ် သရုပ်တူအောင် သရုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်
အရည်အချင်း ပြည့်ဝသူ သာ ဘလော့ အိုင်ဒေါ အဖြစ်ရွေးချယ်မည်
ဘလော့အိုင်ဒေါ .... ဒါ ရိုက်တာ မဟုတ် (ဒါကို ရိုက်သောသူ မဟုတ်ပါ )
Do you want this alarm at5AM daily?
နေ့ တိုင်း မနက် ၅နာရီ ထလိုပါသလား။ Boo အမည်တွင်သော ကြောင်ကို မွေးလိုက်ပါ။
Reliable Alarm Clock Business Agency
at 9:50 PM 1 comments
If you bring presents, bring BATTERY.
ကျန်းမာရေးအတွက် လမ်းလျောက်ကြစို့ 
at 11:42 PM0comments
Shock or ဆော့ ?
ဒီလို ဆော့ခဲ့ဘူးသလား ?
I cry because she wants to MARRY me!
Aelita Andre ချာတိတ်မလေးသည် အသက်၉လ အရွယ်တွင် မိဘ၂ပါး ၏ ပန်းချီဆွဲခန်းတွင် ဆော့ကစား နေလေသည်။ အနုပညာရှင် မိဘ၂ပါးက သူလေးအား ပန်းချီကင်ဘတ်ပေး ဆေးများပေးကာ ဆော့ကစား စေသည်။ ဗီကို ကြည့်လျှင်သိနိုင်ပါသည်။ သို့ သော် ကလေးတဦးအနေဖြင့် ဆော့သည် ဖြစ်စေ ပင်ကိုယ်အနုပညာဇ ပါလာသည် ဖြစ်စေ ချာတိတ်မ၏ လက်ရာ ပန်းချီကားများမှာ ပြပွဲတင်နိုင်အောင် အရည်သွေး ရှိနေလေသည်။ ပန်းချီ မြတ်နိုးသူများ အားပေးသဖြင့် ဟောင်ကောင် ပြပွဲ တခုတွင် ဒေါ်လာ ၂၇၀၀၀ ကျော်ဖိုး ပန်းချီကားများ ရောင်းချခဲ့ရလေသည်။ ထိုလက်ရာများမှာ သူမ အသက် ၂နစ်ခန့် က ရေးဆွဲ (ဆော့ကစား)ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါတွင် သူမ အသက် ၄နစ်ရှိပေပြီ။
ပြန်တွေးမိရင် ငယ်ငယ်က ဂျေ တကောင် နာမည်ကျော်ပန်းချီဆြာ မဖြစ်ခဲ့တာ ရှေးလူကြီး မိဘတွေက မသိနားမလည်လို့ ။
ငွေအလဟသ ကုန်တယ် ထင်လေသော မာတာမိခင်နှင့် ပီတု ဖခင်ကြီး တို့ အား လွမ်းမိပါသေးသည်။ ပီတု ဖခင်ကြီးအား ကူညီရင်း သင်္ဘောဆေးဗူး အဖုံးပိတ် ပေးရာ အတွင်းအားများသွားသဖြင့် အဖုံးကျွံကျပြီး တဂါလံ သင်္ဘောဆေး တဗူးလုံး လွှင့်ပစ်ခဲ့ရခြင်း အတွက် လွမ်းမိပါသေး၏ (ဖခင်များနေ့ အတွက် အမှတ်တရ)
I WILL BE THERE FOR YOU....
Welcome to GHOST concert!
Solve this equation. What is the result of F(x)?
X = Time and Length
Given: BUSH, OBAMA, OSAMA
STEP 1. September 11, 2001 Tuesday 8:46 am – 10:28 am
when x = length
F(X) = LENGTH( BUSH, OSAMA)
= 4, 5
F(X) = F( OSAMA WON )
= The worldwide economic start collapse
Then... I lost the job
STEP 2. F(X) May 1, 2011
F(X) = LENGTH( OBAMA, OSAMA)
O O : Conclusion = DRAW
B S : Conclusion B > S ( B is higher in ascending order)
A A : Conclusion = DRAW
M M : Conclusion = DRAW
F(X) = F( B WON, S DIED )
= American SUCCESSFULLY returns 9/11 horror to OSAMA
ယူနီဗာစီတီး အော့ဖ် ဘလော့စပေါ့
ဘဲနဲ့ ဗျာ.. ကလေးကို ဂလိထိုးရတယ်လို့ 
တိရိစ္ဆာန်များ မနှိပ်စက် မညှင်းဆဲရေး အဖွဲ့ 
at 6:12 PM2comments
Pantless Wushu Master
အမည်။ ။ Keenan Stone
အသက် ။ ။ 20
နေရာ ။ ။University of Virginia
ရလာဒ်အမှတ် ။ ။ ၇.၇ (အများဆုံး၁၀မှတ်)
လက်တွေ့ ရလာဒ်။ ။ မြင်သူအပေါင်း ပါးစပ်မပိတ်နိုင်ခြင်း
ယူနီဗာဆစ်တီး အော့ဖ် ကွန်ပျူတာ မျက်နှာပြင်
ဘယ်သူ .... ကြောင်စာ ခိုးစားသလဲ..?
ဟ ...ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ .. ကြောင်စာအထုပ်က ပေါက်နေပါလား။ အင်း .. ငါအပြင်ထွက်နေတုံး တယောက်ယောက်က ကြောင်စာ ခိုးစားတာဘဲ ဖြစ်ရမယ်..
အိတ်က ကြောင်ဖောက်ထားတာနဲ့ လည်း မတူပါဘူး... အိတ်ကို ဖောက်ထားတာက ခပ်ဝိုင်းဝိုင်း အပေါက် ဖြစ်နေတော့ .. သံသယ ဖြစ်စရာ ပါလား ...
သံသယ အမှတ်(၁)... မင်းက အိတ်အခွံနဲ့ အနီးဆုံးဘဲ ... ဟေ့ မာစီ .. မင်း ခိုးစားသလား...
... အမြှီးမလှုပ်.. မျက်လုံး မမှိတ်မသုံ ဖြင့် ပြန်စိုက်ကြည့်သည်...
ငါ့ကို ကြည့်စမ်း ……
မင်းလုပ်ခဲ့သလား.. အိတ်အပေါက်ရာက မင်းပါးစပ်နဲ့ တတိုင်းတည်းဘဲ...
... ခေါင်းစောင်း၍ မသိသလို နေသည်.. ခပ်တင်းတင်း ဖြင့် ပြန်ကြည့်သည်. ..
မင်းခိုးစားမဲ့ပုံ မပေါ်ဘူး ….
သံသယအမှတ်၂.. ဟိုတကောင်....တံခါးနားက အကောင် .. မင်းလုပ်သလား...
... အမြှီးနှံ့ ပြီး မျက်လုံးလေး မှေးစင်းကာ မကြားသလို လုပ်နေသည်။
ဒယ်န်ဗာ Denver.... မင်းလုပ်သလား
... အမြှီးနှံ့ ပြီး မျက်လုံးကို လုံးဝ မဖွင့်တော့ ဘဲ ခေါင်းလှည့်သွားသည်.. ပြနေသော အိတ်ကို ပင် ပြန်မကြည့်ဘဲ ခေါင်းငုံ့မျက်စိမှိတ်ထားသည်..
ဒယ်န်ဗာ Denver.... ဒါ မင်းလုပ် ခဲ့တာလား..
... ခေါင်းလေး ငုံသွားသည်...
ဒယ်န်ဗာ Denver........ ငါ့ကို ကြည့်.....
... ခေါင်းလေး ငုံသွားသည်... ၀မ်းနည်းနေသလို ငိုနေသလို လို .....
ဒယ်န်ဗာ Denver.... မင်းခိုးစားသလား.. ငါ့ကို ကြည့်...
….ခေါင်းမဖော်ပါ.. ခေါင်းငုံ နေရှာသည်.. ကြောက်ရွံ့နေသည်။
ဟေ့ မေးနေတယ်လေ.. ဒယ်န်ဗာ Denver....ငါ့ကို ကြည့်..
ငါ့ကို ကြည့်လို့ ပြောနေတယ်.....
...... တဖြည်းဖြည်းဖြင့် ခေါင်းမော့ကာ မျက်လုံး မဖွင့်ရဲဘဲ ပြုံးဖြဲဖြဲ ဖြင့် သွားဖြဲပြသည်...
အိုး ဘုရားရေ..... မင်းလုပ်တာပေါ့
...... မျက်လုံး မှေးစင်းကာ ကြည့်ပြီး သွားဖြဲ ပြသည်... အရသာ ကောင်းကြောင်း နှတ်ခမ်းကို လျှာဖြင့် ထပ်လျက်ပြသည်။
မင်း ကြောင်စာ ခိုးစားတယ်ပေါ့..
တထုပ်လုံး ကုန်အောင် စားသလား..
...... မျက်လုံး မှေးစင်းကာ ကြည့်ပြီး သွားဖြဲ ပြသည်...
်မင်း.. ကြောင်စာ ခိုးစားတယ် ... မင်းမရှက်ဘူးလား .. ဒါခွေးစာ မဟုတ်ဘူး...
.. တဖြည်းဖြည်းဖြင့် ပြုံးရာမှ.. ငိုသလို ဖြစ်လာသည်။ မချိသွားဖြဲပြသည်... သူခိုးစားခြင်းအတွက် ၀မ်းနည်း လာသည် သခင်အား ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ကြည့်သည်...
ကောင်းပြီ.. မင်းအပြစ် မင်းသိတယ်နော်...
မင်းဘယ်လို အပြစ်ဒဏ်ခံရမယ် ဆိုတာ သိတယ်နော်... အပြင်မှာ မနေနဲ့ ... သွား …. မင်းခွေးအိမ်ထဲ မင်းဝင်နေတော့...
အမြှီးလေး ကုပ်ကာ ဧည့်ခန်းထဲမှ တဖြည်းဖြည်း ထွက်ပြီး ခွေးအိမ်လေး ရှိရာ အခန်းထဲ ၀င်သွားသည်…
ဟိုတကောင်... မာစီ .. မင်းက ဒယ်န်ဗာလုပ်တာကို ကြည့်နေ တယ်ပေ့ါလေ.. ဟုတ်လား .. ဒါဆို မင်းလဲ အတော် ပျော်နေတယ် လို့ ယူဆတယ်..
at 4:25 PM 1 comments
Label: Animal, Funny
အဆော့သန်တဲ့ ကလေးဘ၀ အောင်းမေ့သတိ ရစေဖို့ 
Can you squeeze into the tiny box?
နင်ဘယ်သူလဲ ငါဘယ်သူ ဘဲ
ဒတ်ပုံကို ကလစ်နှိပ်ပါက မည်သည့်အရာဖြင့် ဤပုံ ဖော်သည်ကို သိရမည်။
ငှက်အမည် Caribbean flamingo
နေရာ Yucatan, Mexico
ရိုက်ပုံ ဟယ်လီကော်ပတာ အထက်မှရိုက်သည်။
ရိုက်သူ Photographer Bobby Haas
ကြည့်ရဲသူ ကြည့်ရဲသူ အားလုံး ကြည့် စေ...
စားကြအုန်းမလား ဘရိတ်ဖတ် - ဥ
(ဥ ဆိုလို့ ရိုင်းတယ် မထင်ပါနဲ့ဗျာ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက် မဟုတ်ကြောင်း ပြောလို၍သာ။)
ပင်လယ်ရေအောက်မှ Jelly fish ဖြစ်ပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ အဆိပ်မျှင် စူးလျှင် တာဝန်မယူ
တ၀ဟဲ စားသောက်ဆိုင် ပိုင်ချင်